Red carpet Oscar 2017 - ny akanjo tsara indrindra sy ny akanjo ratsy indrindra amin'ny lanonana
Kintana Encyclopedia of Stars
Oscar 2017 - akanjo - akanjo tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny kintana mena
Maro ireo niandry tamin'ny fo mamy ho an'ny lanonana Oscar tamin'ny taona 2017 - ny lozam-pifankalian'ny kintana dia midina amin'ny tantara ary mampitolagaga. Manao akanjo maotina amin'ny loko sy ny loko isan-taona izy ireo isan-taona. Ny famoronana lamaody izay tarihan'ilay mpilalao sarimihetsika amin'ny mena dia hodinihina hatramin'ny farany.
Red carpet Oscar 2017 - akanjo tsara indrindra
Raha vantany vao fantatry ireo olona atolotra ireo ilay statuette efa nipoitra, dia manomboka mieritreritra ireo mpankafy hoe inona ny kintana manokana. Indraindray ireo mpilalao sarimihetsika dia maneho tsy ampoizina ary miseho amin'ny karazana mena amin'ny fomba tsy mahazatra. Saingy misy fotoana izay mbola manamarina ireo fanantenana ireo mpankafy sy ireo mpitsikera ny mpitsikera. Tamin'ny lanonana tamin'ity taona ity, ny akanjo tsara indrindra Oscar tamin'ny taona 2017 dia natolotra, izay nanjary tena endriky ny lanonana ary nahatonga ny fahatsapana tsy hay lazaina.
Emma Stone - akanjo Oscar 2017
Ny fahatsapana lehibe indrindra tamin'ilay hetsika goavam-be Oscar 2017 - Ny hatsaran-tarehin'i Emma Watson, dia niteraka fifandirana teo amin'ny vahoaka. Niseho tamin'ny faha-89 taonany izy tao anaty akanjo lava volom-bolamena volamena. Rehefa manoratra ny akanjo, dia afaka manavaka ny toetrany manaraka:
Ny tsara indrindra dia mifanaraka amin'ny teny roa - ny fiterahana sy ny fanatsarana. Izany dia mifanaraka tanteraka amin'ny fomban'ny hetsika goavam-be Oscar 2017, fanao mahatalanjona izay mahatonga ny fanindrahindrana isan-taona. Ny endriny dia teo amin'ny akanjo, ary ny akanjo dia natao tao amin'ny fanahin'ny Hollywood taloha. Ny sary dia namela tsy isalasalana fa tonga ilay mpilalao sarimihetsika.
Ny fanararaotana na ny fifamatorana dia tsy dia mazava loatra ny vokatra izay tsy hanonona anarana, aorian'io ny sary rehetra dia mihodinkodina amin'ny tsy fahampiana. Ny endriny dia voaravaka amin'ny endriny maromaro, ary ny tendrony dia vita amin'ny endriky ny vatosoa mamirapiratra. Ny sangan'asan'ny mpamorona amin'ny fomba tsara indrindra dia nanasongadina ny endrika tsara indrindra nataon'i Emma Stone.
Ny maherifon'ny karipetra mena ihany koa dia Nicole Kidman, izay nifidy akanjo avy amin'i Armani Prive. Ho an'ny mpilalao sarimihetsika hafa, modely toy izany ny modely toy izany noho ny lokony sy ny loko, fa i Nicole dia niandry lavorary. Fahasahiranana kely no nitranga rehefa tonga tamin'ny lanonana ilay mpilalao sarimihetsika. Ny mpanamboatra dia nanitatra ny akanjon'ilay mpilalao sarimihetsika tamin'ny vato, saingy tsy noraisiny ny halalin'ny hoditra, ka nisy bala mena nipoitra teny amin'ny faritra vozon'akoho. Fa ny fihetsiky ny mpilalao sarimihetsika dia tsy misy fiantraikany, dia mbola nanohy niady tamin'ny vadiny izy . Tamin'ny lanonana Oscar tamin'ny 2017, dia porofo mazava ny fitafin'i Nicole Kidman fa mitaky fahafoizan-tena ny hatsarana.
Tamin'ny fotoam-piravoravoana, ny akanjo Oscar 2017 dia natolotra ho toy ny mpilalao hafahafa, sy ny safidy manintona. Noho izany, Kirsten Dants dia nifidy ny vokatra, nataon'ilay trano fombam-panahy Christian Dior. Ny sary natolotra dia mifanohitra amin'ny faminaniana ireo mpitsikera fa amin'ny 2016 ny lanonana Oscar dia tokony hanana endrika mitovy. Ny sangan'asan'ny mpamorona dia azo lazaina mora foana fa sangisangy, fa kanto .
Ny fitafiana Kirsten Dunst dia manavaka ireo toetra mampiavaka azy:
Ny halavany eo amin'ny tany, ny vokatra dia manarona tanteraka ny tongotra;
Fa ny mpilalao sarimihetsika dia niboridana tsara, ary ny tendron-poko dia nanantitrantitra tsara ny tratrany;
Tsy misy afa-tsy ny mpanakorontana tsy mahita na dia ny mpitsikera be dia be aza. Fiarandalamby kely sy paosy kely ihany no azo ambara ho tsipiriany tsy mahazatra. Ny fisian'io farany io dia nanjary fantatry ny olona rehetra raha nanafina ny tanany tao anaty paosiny ilay mpilalao sarimihetsika.
Dress Charlize Theron ao amin'ny Oscar 2017
Ao amin'ny sokajin'ireo sary mamoafady indrindra dia nahitana fitafy Charlize Theron tao Oscar 2017, izay mitovy amin'ny endriky ny andriamanibavin'ny Grika. Raha tokony ho ny akanjo fotsy mahazatra amin'ny mpilalao sarimihetsika dia akanjo iray misy fiantraikan'ny loto telo amin'ny loko: mainty, volamena ary onja. Ny mpamorona an'io dia mamirapiratra amin'ny heviny ara-bakiteny sy ara-panoharana ny sangan'asa sasantsasany koa dia trano maotera Dior. Amin'ny maha-endri-tsarin'ny modely, azonao atao ny mametraka ireo izay manavaka ireo akanjo hafa amin'ny lanonana Oscar 2017:
Ny akanjom-pirahalahiana eo amin'ny fonon-drakitra amin'ny fehikibary dia misikera miaraka amin'ny fehin-koditra lehibe avy amin'ilay fitaovana izay namafàna ilay lahatsoratra;
kanto, na dia lalina aza izy, saingy namela efitrano fialan-tsasatra bebe kokoa, toy izay misokatra amin'ny endrika kiraro. Mifanaraka amin'ny fomban-drazana tsara indrindra amin'ny lanonana Oscar amin'ny 2017 izany, ny akanjo misy azy ireo dia manamarika ny fisiana azy;
Ny firavaka miaraka amin'ny fanampiana mirindra dia nanantona kavina volom-bolafotsy.
Dress Halle Berry amin'ny Oscar 2017
Amin'ny fotoam-piravoravoana Oscar 2017, ny endriky ny kintana dia miavaka amin'ny fomba tsy mahazatra, izay tsaroany sy manintona ny saina. Izany dia mifanaraka tanteraka amin'ny endriky ny Halle Berry:
Fanampiana mahafinaritra no fiakarana fehiloha teo amin'ny lohany tamin'ny endrika disco. Noho ny lamaody maoderina, ny mpilalao sarimihetsika dia nijery tanora nandritra ny taona maromaro.
Saingy tsy izany ihany no nahasarika ny sain'ny hafa ho any Halle Berry. Nanamarina ny zavatra andrasana amin'ny lanonana Oscar 2017 izy, izay misy ifandraisany amin'ny tsy fahampiana. Ny akanjony beige amin'ny akanjo fotsy matevina ary miaraka amin'ny lamosina matevina nivangongo tao amin'ny kitrokely teo an-tsorony havia, nanantitrantitra tsara ny sarin'ny mpilalao sarimihetsika. Ny famelana amin'ny famoronana dia an'ny trano fanao malaza Atelier Versace. Nisara-bazana ireo mpankafy tao amin'ny toby roa, ny sasany nitsikera izany, ary ny hafa - noderaina.
Dress Alicia Wickander amin'ny Oscar 2017
Alicia Vikander dia nanatevin-daharana ny isan'ny olo-malaza izay nifidy ny akanjo fiarovan-doha Oscar 2017, izay manintona ny tsirony tsizarizary. Ny modely fanorenana dia tonga lafatra ho an'ny mpilalao sarimihetsika malaza ary misy karazany sahaza toy izany:
vita amin'ny dantelina;
manana famolavolana mahaliana sy tadiny kely kely;
Ny glamor dia nanome satroka asymmetrika, izay nisokatra kely ho an'ny tsiranoka matevina amin'ny overview. Nitranga izany tamin'ny fanahin'ny hetsika goavam-be Oscar 2017, akanjo manintona mampientanentana izay manaitra ny fideran'ny mpijery;
Ny fanampim-panazavana ihany dia ny kolokolokolo.
Dress Jessica Bill - Oscar 2017
Jessica Bill, noho ny sary namboarina tsara, dia mendrika ny hita ao amin'ny sokajy "tsara indrindra Oscar dresses 2017". Niditra tamin'ny andian-jiolahimboto volom-bolamena izy ary nandeha an-tongotra tao anaty akanjo mareva-doko avy amin'ny mpivarotra New York Kaufman Franco. Voafehin'ny vokatry ny mailaka mailaka, izay nanana ny vokatra. Amin'ny fomba iray, nanao toy izany ilay mpilalao sarimihetsika ho toy ny statuette ankosotra. Araka ny lamina loko, ny vokatra dia nanakoako tamin'ny clutch sy ny kavina kely .
Red carpet Oscar 2017 - akanjo ratsy indrindra
Ny hetsika manetriketrika dia marihina fa tsy ny hatsikana mahafinaritra fotsiny ihany, fa koa amin'ny akanjo izay nanosika ny fahamenarana ireo olo-malaza ary tsy nahatsiaro tsy avy amin'ny tsara indrindra. Nosoratana ho endrika malaza indrindra Oscar 2017 izy ireo. Ny fahanginan'ny kintana dia tsy nahitana fahombiazana, ary ny bika aman'endriny dia nanjary nifandray tamin'ireo sary misimisy izay niparitaka haingana tany amin'ny gazety. Ny endrika ratsy indrindra - Oscar 2017, dia aseho amin'ny akanjo ataon'ny olo-malaza izay nitarika ity valiny ity:
mpilalao sarimihetsika kely fanta-daza Blanca Blanco;
mpihira malaza Katy Perry;
kintana izao tontolo izao Mariah Carey.
Blanca Blanco amin'ny Oscar 2017 - akanjo
Ny toerana voalohany nohajaina tamin'ireo olo-malaza izay naneho ny akanjo marevaka malaza - Oscar 2017, dia nalaina avy amin'ilay Amerikana mpilalao blanca Blanco, izay tsy dia tena fantatra loatra. Azo inoana fa nanapa-kevitra ny hanintona ny sain'ny olona izy ary hivoaka ho an'ny besinimaro amin'ny akanjo tena mahatalanjona. Ny endriky ny akanjo avy amin'ny vokatra avy any Lanvin amin'ny fotoana iray dia tsy mahavonjy ny toe-draharaha, ary i Blanca dia nahatonga ny mpaka sary hisambotra ny tendron'ny alokaloka beige. Araka ny dikan-teny iray, ny mpilalao sarimihetsika dia tsy misy lamba firakotra.
Ny akanjon'i Blanka dia nanana toetra mampiavaka azy, ka ny iray dia nanjary antony nahatonga ilay vokatra ho lany tamin'ny sokajy "akanjo ratsy indrindra tamin'ny 2017": "
alokaloka mavo miaraka amin'ny loko volamena;
lava amin'ny tany;
Ny tsy fahampian-tsakafo tsy dia ilaina loatra amin'ny tongotra, izay antony nahatonga henatra.
Mariah Carey - akanjo Oscar 2017
Ilay mpihira miaraka amin'ny laza malaza Mariah Carey dia fantatry ny talentany, fa koa ho an'ny endrika mahatalanjona. Ny kintana dia tsy nahavita nampiseho azy ireo tamin'ny lanonana, saingy nahatratra ny vokatra mifanohitra amin'izany ary anisan'ireo olo-malaza izay nanolotra ny akanjo tsy nahomby tamin'ny OSC 2017. Ny famolavolana lalina dia nanolotra ny tratran'ny mpihira tamin'ny fiatrehana tsy fahita firy, satria ny kofehy no tena nanahirana azy. Ny akanjon'i Mariah Carey avy amin'ny Philipp Plein dia nanana endrika mampiavaka azy:
dia vita amin'ny votoatin'ny printy voalohany amin'ny reptile;
dia nisy tsiranoka nanokatra ny tongotra;
Famolavolana tsy manam-petra, izay antony nahatonga ny fahalianana.
14 hairstyles of celebrities, nanova tanteraka ny zava-bitany
Sarotra ny mahafantatra: Katy Perry tao anaty masom-bozaka mampahatahotra ny paparazzi
Kirsten Dunst sy ny fofombadiny Jesse Plemons dia lasa ray aman-dreny
Ny endrika iray hafa, izay nahatsiaro mahonena tamin'ny lanonana, dia mpihira Katy Perry. Niseho teo anoloan'ny mpihaino izy tao amin'ny akanjo tsara tarehy sy be tarik'i Jean Paul Gaultier. Nahita azy tsara ny celebrity, saingy tsy najanony ilay zavatra noforonina mba hiditra ao amin'ny sokajy "akanjo scandalous - Oscar 2017". Izany dia nitranga noho ny zava-misy fa tamin'ny fotoana iray dia nivoaka ny akanjo teo ambadiky ny seam. Ireo mpaka sary manerana izao tontolo izao dia nahasambotra izany tao amin'ny sary, izay napetraka tao amin'ny famoahana maro.
Fitomboana an'i Gerard Butler
Fitomboana an'i Bruce Lee
Angelina Jolie dia 35 kilao monja!
Nina Dobrev dia sitrana
Ny haavon'ny lanjan'i Emma Watson
Ny fitomboana sy ny mari-pamantarana hafa an'ny Kate Moss
Photoshoot amin'ny fomba amam-borona
Fandefasana linoleo amin'ny tanany manokana
Ahoana ny fomba hanaovana ny akvarium?
Hyperplasia amin'ny endometrium - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Myositis amin'ny hozatry ny lamosina
Sakafo narotsaka solyanka - fomba mahazatra mahandro sakafo
Zanakavavin'i Bruce Willis
Adhesions amin'ny ovy
Fanomezana ho an'ny rainy amin'ny tanany manokana
Irina Sheik dia nialona an'i Bradley Cooper tamin'i Lady Gaga
Sakadia eo amin'ny varavarankely - ny fomba mahomby indrindra amin'ny fambolena
Ahoana no hampitombo ny estrogen?